Twitteriin Eenyummeessaa Fayyadamtoota Kuma 100 cufee ture bane. | oroict.com Solutions
Twitteriin Eenyummeessaa Fayyadamtoota Kuma 100 cufee ture bane. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions
Twitteriin Eenyummeessaa Fayyadamtoota Kuma 100 cufee ture bane.
Twitteriin Eenyummeessaa Fayyadamtoota Kuma 100 cufee ture bifa haaraan gadi lakkise.
Ebla 17,2019(oroict.com) – Dhaabbanni Marsaalee hawaasaa guddichi idil-addunyaa Twitteriin Eenyummeessaa Fayyadamtootaa ji’a Caamsaa hanga Adoolessaatti ugguraman keessaa hanga Kuma 100 kan ta’an bifa haaraadhaan banuu isaanii dhaabbatichi ibseera. Kunis kan bara darbeetiin yoo walbira qabamu dhibbeentaa 45n kan dabale tahutu himame.
Kanaan dura dhaabbatichi fuula wantootni hin barbaachifne yoo irratti maxxananii gabaafameef fuulicha kan ugguru tahuu kan ibse dhaabbatichi tarkaanfiin kun qofti gahaa akka hin taane eereera.
Kanumaan walqabatee bara haaraa faranjootaa 2019 kan garuu eeruu hawaasa irraa isaan bira gahu qofa osoo hin taane rakkoowwan osoo hin uumamin dursee kan eegu hojiirra oolchuuf hojjachaa jiraachuu dhaabbatichi himeera.
Sosochiilee seermaleessa ta’an kan itti fayyadama fuula twitter irratti taasifamu ugguruudhaan kan bara darbeetiin yoo wal madaalchifnu eenyummeessaaleen guyyatti ugguraman dhibbeentaa sadiin dabaluutu himame.
Maddi: Rooyitarsi kan jedhe INSA.
Twitter Eenyummeessa Kuma 100 bane